I-imeyile: Chonga ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-35 kwiTrafikhi yakho yeWebhu engaziwayo kwaye ukhulise uluhlu lwakho lwe-imeyile | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 28, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Ukuthengisa nge-imeyile kuyaqhubeka ukuba lelona jelo liphezulu ledigital yedijithali kwi-38: 1 ngokophando olwenziwe Litmus. Eyona ndlela ikhawulezayo yokukhula kwihlabathi ledijithali kukukhulisa uluhlu lwakho lwe-imeyile kunye nabantu ozibandakanyayo, ojolise kubo.
Ukufumana ezo dilesi ze-imeyile akukho lula. Abathengisi bachitha ukugcwala kwemali eninzi kwiiwebhusayithi zabo ngentengiso ehlawulelweyo, i-SEM, i-SEO, kunye ne-PR, kwaye bagqibela ngokufaka iidilesi ze-imeyile ukusuka kwi-5% yezo ndwendwe.
Ngapha koko, abathengisi bafuna enye indlela ebiza iindleko yokuphinda babuyele kwiindwendwe kwiwebhu. I-Facebook kunye nokubonisa ukujolisa kwakhona kuyasebenza, kodwa kuyabiza kwaye awuyiyo eyakho ukugcwala. Abathengisi emva koko bahlawule kaninzi kwakhona ukubuyisa loo traffic kwiwebhusayithi zabo.
I-GetEmails ye-imeyile esekwe kwisisombululo sokujonga kwakhona isisombululo
GetEmails ibonelela ngesoftware-njengenkonzo, esekwe kwilifu Ukubuyisela kwakhona i-imeyile Isisombululo esivumela abathengisi ukuba bachonge kwaye babambe ukuya kuthi ga kwi-35% yezithuthi zabo ezingaziwayo ze bafumane iidilesi ze-imeyile ezingekabikho kuluhlu lwabo.
Abafowunelwa abaqokelelweyo, i-GetEmails ibonelela nge-imeyile, igama lokuqala, igama lokugqibela, irekhodi leposi, kunye nephepha lokufika, kwaye idityaniswe ngokuthe ngqo kunye nabo bonke ababoneleli beenkonzo ze-imeyile (njengeKlayiyo, ActiveCampaign, kunye neMailchimp).
I-GetEmails ithumela abathengisi iirekhodi zonxibelelwano abangasenazo, ezivumela ukuba baphinde baphinde bajonge abatyeleli bewebhu nge-imeyile kwaye bathumele i-imeyile ngokuthe ngqo kwiqhezu leendleko zokufumana ii-imeyile ngeendlela zentlalo. Iirekhodi ezipheleleyo zonxibelelwano ziqala malunga neesenti ezingama-25 kwirekhodi nganye, kwaye ezi zinto kujoliswe kuzo kakhulu, abafowunelwa abazibandakanya kakhulu banomyinge ovulekileyo wama-20 ukuya kuma-25%. Abathengisi abaze bahlawule irekhodi kabini, kwaye abahlawuli iirekhodi esele benazo.
Qalisa nge-GetEmails simahla
Akukho khadi lekhredithi elifunekayo, akukho zivumelwano, kwaye unokunyusa, wehlise, okanye urhoxise naliphi na ixesha.
I-imeyile: Ushwankathelo lwezomthetho
I-GetEmails isemthethweni eMelika. Yi hayi I-GDPR okanye i-CASL iyahambelana, ke itekhnoloji ayifumaneki eYurophu naseCanada. Isiseko sedatha se-GetEmails sinabafowunelwa baseMelika kuphela kuyo.
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, umthetho wase-US CAN-SPAM ukhetha ukuphuma, kunokuba ukhethe ukungena. Oko kuthetha ukuba nje ukuba unika abamkeli ithuba lokuphuma ekufumaneni i-imeyile, uyavumelana ne-CAN-SPAM. Izikhokelo ezivela kwi-FTC kumthetho wase-US CAN-SPAM, Cofa apha.
Kuthekani malunga noMthetho woKhuseleko lwaBathengi eCalifornia (CCPA)? Ngelixa ezinye iindawo zeCCPA zifana neGDPR, iCCPA kunjalo hayi malunga nokukhetha ukuthengisa nge-imeyile. I-CCPA imalunga nokubhengeza abathengi kunye neenguqu zomgaqo-nkqubo wabucala. GetEmails is Ukuthotyelwa kweCCPA, ngaphandle kokuba abathengisi benza utshintsho kwimigaqo-nkqubo yabucala.
Cofa apha Ipakethi esemthethweni ye-GetEmails, eyilelwe ukwabelwana neqela lakho lezomthetho.
I-imeyile esekwe ekuSebenziseni iZenzo ezilungileyo
Ukuthengisa nge-imeyile kumalunga nokuhanjiswa, ubugcisa kunye nesayensi yokufumana i-imeyile kwibhokisi engenayo. Ukuhanjiswa kuhambelana nokuzibandakanya: amaxabiso aphezulu avulekileyo, amaxabiso aphezulu okucofa, amabhonasi asezantsi, kunye nezikhalazo eziphantsi.
Ukubuyisela kwakhona kwi-imeyile, ukuba kwenziwe ngendlela eyiyo, kunokuhanjiswa okukhulu. Nazi ezinye zeendlela ezilungileyo:
Thumela u Enkosi ngokumisa kule ndawo email
Uphawu lwe-ecommerce, sebenzisa uthotho lwakho lokwamkela oluqhelekileyo, kodwa sebenzisa lo mgca wesifundo kwi-imeyile yokuqala
Abapapashi, thumela i-imeyile ngalo mxholo wesifundo kunye nomxholo wakho ophezulu
Emva kothotho lwe-imeyile eyamkelekileyo, bongeze kuluhlu lwakho lokuposa
Sukulinda ukuthumela kwaba nxibelelwano; setha i-automation ethumela i-imeyile yokwamkela nje ukuba ufumane idatha
Iimeko kuphela apho i-GetEmails ibone iingxaki ngezikhalazo kuxa abathengisi belinde iiveki ezimbini okanye ngaphezulu ukuthumela
Thumela ngelixa usengqondweni ephezulu, ungalindi ukuba umsebenzisi alibale uphawu lwakho
Nantsi ividiyo malunga nento oyithumelayo, kunye nemizekelo embalwa:
Isebenza njani i-imeyile: infographic
Zisebenza njani ii-imeyile: Izifundo zamatyala
Ukubuyisela kwakhona i-imeyile ngokusekwe kunceda iimveliso ze-ecommerce zikhulise uluhlu lwazo ngeqhezu leendleko zeedilesi ze-imeyile ezifunyenwe kwiindlela zentlalo.
UFreida Rothman ndibone i-10x ROI ngoLwesihlanu omnyama. Bafumene izikhokelo ezivela kwi-GetEmails ngeesenti ezingama-25, kwaye bahlawula ixabiso eliphakathi le- $ 1.42 kuFacebook naku-Instagram. Izikhokelo ze-GetEmails zezona zikhokelo eziguqukileyo.
Isifundo seFreida Rothman
I-GetEmails inceda abapapashi ukuba bakhulise uluhlu lwabo lwe-imeyile kunye nabo banxibelelana nabo kwaye balwe nengxaki yokutsala engapheliyo onke amava omvakalisi.
Iindaba zeSiprofeto Jonga bafumene ii-clickers ezisebenzayo ezingama-20% ngaphantsi kokuhlawulwa kwabo babhalisile ngamajelo entlalontle ngaphezulu kweentsuku zabo ezingama-60. Iziphumo zabo zibandakanya iidilesi ze-imeyile ezingama-45,000 ezifunyenweyo, ii-imeyile ezingama-20,000 ezivuliweyo (iipesenti ezingama-45 ezivulekileyo) kunye ne-11,000 yokucofa (ngama-25% kwinqanaba lokucofa)
Isiprofeto Iindaba Jonga ukufundwa kwamatyala